လူသတ်ဖို့အတွက် လက်ထပ်ခဲ့သူ - For her Myanmar
တကယ့်လက်တွေ့လောကရဲ့ Black Widow တဲ့ ယောင်းတို့ရေ.. စကားလက်ဂျိုဟန်ဆန်လောက်မလှပေမယ့် သူ့ထက်တော့ ကြမ်း 😀
လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ ချစ်ခြင်းရဲ့ သင်္ချိုင်းပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ငရဲရဲ့ဘဲလ် လို့ အမည်တွင်တဲ့ သူမအတွက်ေတာ့ ဒီစကားပုံက လုံလောက်ခဲ့ပုံမပါပါဘူး။ လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ သူမလက်ထပ်လိုက်တဲ့ ယောက်ျားအတွက် သင်္ချိုင်းပါပဲ။ ကျအောင်ခြွေတယ်၊ လက်ထပ်ယူတယ်၊ ပြီးရင် သတ်ပစ်တယ်။ သူမရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ? သတ်ဖို့အရေး လက်ပဲထပ်နေရဦးမလား? ဘာကြောင့် ကိုယ်ယူပြီးတဲ့ ယောက်ျားတွေကိုပဲ သတ်ရတာလဲ? သူမက ရူးနေတာလား? ကဲ အဖြေကို အက်ဒ်မင်နဲ့ အတူတူ ရှာကြည့်ကြရအောင်…
သူမနာမည်ကိုတော့ Belle Gunness (ဘဲလ်ဂန်းနက်စ်) လို့ခေါ်ပြီး ၁၈၅၉ခု နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အရပ်ကတော့ ၆ပေလောက်ရှည်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၂၀၀ လောက် ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘဲလ်ဟာ နော်ဝေကနေပြီး အမေရိကန်ကို စီးပွားရှာဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ဘဲလ် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပထမဆုံးအမျိုးသားကတော့ Mads Albert Sorenson ဖြစ်ပြီး ၁၈၈၄ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူမတို့မှာ ကလေး ၄ယောက်ရှိပါတယ်။ နှစ်ယောက်ကတော့ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ သေဆုံးခဲ့ကြတာပါ။ မကြာမတင်မှာပဲ ဘာကြောင့်ရယ်မသိ သူမတို့ အိမ်ကြီး မီးလောင်ပါလေရော.. ဒီအတွက် သူမတို့ အာမခံကြေးတွေ မနည်းမနောရလိုက်ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာတော့ Sorenson ဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အသက်အာမခံကြေးတွေကတော့ ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိလိုက်ရပါဘူး။ ဒီဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးဖြစ်သွားခဲ့တာဟာ သံသယဝင်စရာအချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒီအဖြစ်တွေအပြီးမှာ သူမဟာ ခပ်မြန်မြန်ပဲ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်လိုက်ပါတယ်။ ၈လပဲကြာပါသေးတယ်၊ သူမရဲ့ အမျိုးသားက ထပ်သေဆုံးပြန်ပါရော.. နောက်ထပ် အိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက် ဘဲလ်ဟာ သတင်းစာထဲ ကြော်ငြာထည့်ပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတွေဆီကုို စတင်ချဉ်းကပ်ပါတော့တယ်။ John Moo, Henry Gurholdt, Olaf Svenherud, Ole B. Budsburg, Olaf Lindbloom, Andrew Hegelein စတဲ့လူတွေအပြင် အခြား အမည်မသိသူတွေလည်း အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဘဲလ်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ သူမနဲ့ သူတို့ သင့်လျော်မယ်လို့ ထင်တဲ့အခါ သူမရဲ့ လယ်တောအိမ်လေးကို လာလည်ပါတဲ့.. ဟုတ်ကဲ့.. သွားလည်ပါတယ်။ ပြန်မလာတော့ပါဘူး။
ဘာမှန်းမသိတဲ့ ပျောက်ဆုံးမှုတွေထဲမှာ အမျိုးသားတွေအပြင် သားသမီးတွေပါ အစအနရှာမရတော့တာလည်း ရှိပါတယ်။ဥပမာဆို သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ ပီတာဂန်းနက်စ်သေဆုံးတာအပြင် သူ့ရဲ့ မွေးကင်းစ သမီးလေးပါ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ မွေးစားထားတဲ့ သမီးလေး ဂျင်းနီကိုလည်း ဘဲလ်ရဲ့ အိမ်မှာပဲ သေဆုံးလျက်သား တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အခြားအခြားသော ကလေးတွေလည်း ထိုနည်းတူစွာပါပဲ။
ကံကြမ္မာကတော့ အမြဲတမ်း ဘဲလ်အပေါ်ပဲ ကွက်ပြီးကောင်းမနေခဲ့ပါဘူး။ အပေါ်မှာဆိုခဲ့တဲ့ Andrew Hegelein ရဲ့ညီ Asle Hegelein ဟာ အစ်ကိုပျောက်ဆုံးမှုကြောင့် ဘဲလ်ဆီကို စာရေးစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဘဲလ်ကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပါပဲ အန်ဒရူးဟာ သူမနဲ့အတူ ရှိမနေပါဘူးတဲ့။ အမျိုးတွေဆီကို အလည်သွားတာ ဖြစ်နိုင်ပါသတဲ့.. ဒါပေမဲ့ Asle က မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘဲလ်က မယုံကြည်ရင်လည်း သူမဆီမှာ ကိုယ်တိုင်လာကြည့်နိုင်ကြောင်း၊ ရှာမယ်ဆိုရင်လည်း သူမပါ ကူညီပေးမယ့်အကြောင်း၊ဒါပေမဲ့ ရှာဖွေဖို့ စရိတ်စကတွေက ဈေးကြီးတာကြောင့် Asle က အကုန်အကျခံရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ သူမအတွက်လည်း ကူညီခ ထိုက်သင့်သလောက် ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ် ။ ဒါဟာ သူမရဲ့ ကံဆိုးမှုအစပြုခြင်းအကြောင်းရင်းပါပဲ။
ဒီထဲမှာ ထူးခြားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်က ရှိနေပါသေးတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဘဲလ်က သူမရဲ့ အင်ဒီယားနားလယ်ကွင်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့ Ray Lamphere ကို ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ Ray က ဘဲလ်အပေါ်မှာ ခံစားချက်တွေရှိနေပြီး တဖြည်းဖြည်း ချစ်မြတ်နိုးလာပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ မထိုက်တန်ဘူးဆိုဆို Ray က ဘဲလ်ဆီလာနေတဲ့ ယောက်ျားတွေကို ကြည့်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ မနာလိုစိတ်နဲ့ သဝန်တိုစိတ်အရင်းခံလို့ ရန်ပြုလာတဲ့အခါမှာတော့ ဘဲလ်က သူ့ကို အလုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခြားလူတွေကိုတော့ သတ်ဖြတ်ပစ်လို့ ပိုက်ဆံတွေယူထားပြီး ဒီလူကိုတော့ အလုပ်ပဲ ထုတ်ခဲ့တာက သူမရဲ့ အချစ်တွေကို မသိမသာများ ဖော်ပြခဲ့လေသလား!!! နောက်မှ ကြည့်စီစဉ်မယ်လို့များတွေးခဲ့လေသလား?
Asle Hegeleinရောက်လာတဲ့အခါမှာ ဘဲလ်က ရှေ့နေတွေနဲ့ သွားတွေ့ပြီး Ray ဟာ သူမရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့အပြင် အိမ်ကိုလည်း မီးလောင်တိုက်သွင်းမယ်လို့ ကြိမ်းဝါးနေတဲ့အကြောင်း သွားတိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့နေကလည်း ရဲတွေနဲ့ အမှုဖွင့်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့ ဘဲလ်ကတော့ ရဲတွေဆီ မသွားခဲ့ဘဲ သူမပိုင်ဆိုင်သမျှ ငွေကြေးဥစ္စာတွေကို ဘဏ်ကနေ ထုတ်ယူခဲ့ပါတယ်။သူတကယ်လည်း ချမ်းသာပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုက ၂၀၁၂ ငွေနဲ့တွက်မယ်ဆို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆.၃သန်းရှိပါတယ်တဲ့… တကယ်တော့ Ray က ခြိမ်းခြောက်တာမဟုတ်ခဲ့ဘဲ သူမလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ အစီအစဉ်ကို သူမကိုယ်တိုင် ချမှတ်ခဲ့တာ အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြား လုပ်ခဲ့တာမျိုးပေါ့။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမ တိုင်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်း သူမရဲ့ လယ်တောအိမ် မီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။ မီးလောင်ပြင်ထဲမှာတော့ အရိုးစု ၄ခု တွေ့ရှိရပါတယ်။ ၃ခုကတော့ သူမရဲ့ သမီးတွေဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြုနိုင်ပြီး ၄ခုမြောက် အရိုးစုကိုတော့ ဂန်းနက်စ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထူးခြားတာက ဒီအရိုးစုမှာ ခေါင်းရှိမနေပါဘူး။ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ခေါင်းကို ရှာရင်း ရှာရင်းကနေ သူမခေါင်းကိုတော့မတွေ့ရဘဲ သူမရဲ့ သားကောင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူတွေရဲ့အလောင်းတွေဟာ သူမလယ်ကွင်းရဲ့ မြေကြီးတွေထဲကနေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ သတို့သားလောင်းတွေအပြင် ကလေးတွေပါ ပါဝင်နေပါတယ်။
သူမတိုင်ကြားချက် ရှိထားတာကြောင့် ဒီအမှုဖြစ်ဖြစ်ချင်း Ray ကို လိုက်လံဖမ်းဆီးကြပါတယ်။ Ray ကတော့ သတင်းကြားတာနဲ့ မေးရှာပါတယ် “အဲဒီမုဆိုးမနဲ့ ကလေးတွေ လွတ်သွားကြရဲ့လားဗျာ.. သုံးယောက်လုံး လွတ်တယ်မဟုတ်လား? ” ဘယ်လောက်တောင် ရင်နာစရာမြင်ကွင်းလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါယောင်းတို့… ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ သေတဲ့သတင်းကိုလည်း ကြားရရှာတယ်။ သူမီးရှို့ပါတယ်ဆိုပြီးလည်း သူ့ကိုလာဖမ်းတယ်၊ သူသိပ်ချစ်တဲ့ အမျိုးသမီး အလောင်းမှာတော့ ခေါင်းတောင်မကျန်ခဲ့ဘူးတဲ့.. ရင်နာစရာအဖြစ်ကြီးပါ။ Ray ကတော့ သူ မလုပ်ဘူးလို့ ငြင်းဆန်နေဆဲပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ဘဝက ဒရာမာကားတွေလို မလှပခဲ့ဘူး ယောင်းတို့ရေ.. သက်သေအဆင့်ဆင့်နဲ့ စစ်ဆေးပြီး Ray ကို အိမ်မီးရှို့မှုနဲ့ ထောင်ချပစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသတ်မှုကနေတော့ သူလွတ်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သေဆုံးသူက ဘဲလ်မဟုတ်လို့ပါ။ အဆုံးသတ်ကတော့ Ray ဟာ ၁၉၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၆မှာ ထောင်အနှစ် နှစ်ဆယ် ကျခဲ့ရပြီး ၁၉၀၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ မှာ ထောင်တွင်းမှာပဲ သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ :'(
မသေဆုံးခင်မှာ Ray ဝန်ခံသွားတာတစ်ခုရှိပါတယ်။ သူဘယ်သူ့ကိုမှမသတ်ခဲ့ပေမယ့် ဘဲလ်သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့ ကူညီမြှုပ်နှံပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ တစ်ခါတလေမှာလည်း အချိန်ကုန် သက်သာအောင်လို့ ဧည့်သည်တွေသောက်မယ့် ကော်ဖီခွက်ထဲ အဆိပ်ခတ် သတ်ပစ်ပါတယ်တဲ့။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဧည့်သည်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘဲလ်က ဧည့်ဝတ်ကျေကျေပြုစုပြီး အစာထဲမှာ ဆေးခတ်ထားပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေ မူးဝေဝေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သားခုတ်ဓားနဲ့ တစ်ခါတည်း ခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်တာပါတဲ့။ အလောင်းကိုတော့ မြေအောက်ခန်းကို သယ်သွားပြီး သူ့ရဲ့ ဒုတိယယောက်ျား အသားခုတ်သမား ပီတာဆီက သူမရလိုက်တဲ့ ပညာနဲ့ ဖျက်လို့ ခွေးတွေကို ကျွေးပစ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အကြွင်းအကျန်တွေကိုတော့ ခြံထဲမှာ မြှုပ်မြှုပ်ထားပါတယ်တဲ့။ တစ်ခါတလေမှာတော့ နံရံထဲ အလောင်းတွေထည့်ပြီး အင်္ဂတေနဲ့ ဖုံးလိုက်တာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးတည်းသော သက်သေ Ray ကလည်း သေဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဘယ်လိုများဆက်ပြီး အမှုလိုက်ကြမလဲ.. ဘဲလ်က ဘယ်များရောက်သွားတာလဲ? ခေါင်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အလောင်းကရော ဘယ်က အမျိုးသမီးလဲ?… ဒီအမျိုးသမီးကို Ray ကလည်း သတ်ထားတာမဟုတ်တော့ ခေါင်းက ဘယ်လိုပြတ်ပြီး ဘယ်ကိုများရောက်သွားရတာလဲ?
ခက်ခက်ခဲခဲ လိုက်လံစစ်ဆေးတဲ့ အမှန်တရားဘက်တော်သားတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ အမှုက ရုပ်လုံးပေါ်ခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီသေဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးကို ဘဲလ်က သူမထွက်မပြေးခင် တစ်ရက်အလိုမှာ ရှီကာဂိုကနေ အိမ်အကူအဖြစ် ငှားရမ်းခဲ့ပြီး အဲဒီနေရာကနေ သူမ ထာဝရလွတ်မြောက်ဖို့ အသုံးချခဲ့တာပါ။ သူမကို ဆေးခတ်၊ မသေမချင်းရိုက်သတ်ပြီး ခေါင်းကိုဖြတ်လို့ ရေထဲအလေးဆွဲပစ်ချထားခဲ့တာပါ။ ဒါမှ ရဲတွေက ခေါင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်ဘဲ သူမလို့ ထင်ကြမှာမဟုတ်ပါလား။
ကလေးတွေကိုတော့ ကလိုရိုဖောင်းနဲ့ မေ့ဆေးပေးသတ်ပြီး အလောင်းတွေကို ခေါင်းပြတ်အမျိုးသမီးအလောင်းနဲ့ မြေအောက်ခန်းမှာထည့်ခဲ့ပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင်တော့ သေဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ အဝတ်အစားတွေဝတ်၊ သူမရဲ့သွားတုကိုချွတ်လို့ အလောင်းဘေးမှာထားပြီး သူမကိုယ်တိုင် အိမ်ကို မီးရှို့ခဲ့တာပါ။ Ray နဲ့ အတူတူထွက်ပြေးကြမယ်လို့ ကတိထားခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူမ ကတိဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ သူစောင့်နေတဲ့လမ်းကို ထွက်မလာဘဲ မီးလောင်နေတဲ့ကွင်းပြင်တစ်ဘက်က သစ်တောထဲ ဝင်ရောက်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ရဲတွေလိုက်ရှာလို့ တွေ့နိုင်မယ့် သက်သေတွေကိုတော့ Ray လုပ်တယ်ထင်အောင် ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။ ချစ်သူရဲ့ သစ္စာဖောက်မှုကို အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရတဲ့ Ray ရဲ့ အဖြစ်ကတော့ ရင်နင့်စရာပါ။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေနောက်ပိုင်းမှာလည်း မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဘဲလ်ဟာ ပဟေဠိဆန်စွာ ပျောက်ဆုံးနေဆဲပါ။ သူဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိသလို သေဆုံးပြီးခဲ့ပြီလို့ သတ်မှတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း အလားတူ ပျောက်ဆုံးမှုတွေ ထပ်ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ ဒီအလုပ်တွေကရော ဘဲလ်တစ်ယောက်တည်း လုပ်ခဲ့တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူမကို နည်းယူပြီး တစ်ယောက်ယောက်ကများ လုပ်နေတာလားဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။
ယောင်းတို့ရော.. ဘယ်လိုထင်ကြလဲ? တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေက စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေထက် ဆန်းကြယ်တယ် ဟုတ်?
Libra (For Her Myanmar )
Reference : Wikipedia , History , Biography
တကယျ့လကျတှလေ့ောကရဲ့ Black Widow တဲ့ ယောငျးတို့ရေ.. စကားလကျဂြိုဟနျဆနျလောကျမလှပမေယျ့ သူ့ထကျတော့ ကွမျး 😀
လကျထပျတယျဆိုတာ ခဈြခွငျးရဲ့ သင်ျခြိုငျးပါတဲ့။ ဒါပမေဲ့ ငရဲရဲ့ဘဲလျ လို့ အမညျတှငျတဲ့ သူမအတှကျေတာ့ ဒီစကားပုံက လုံလောကျခဲ့ပုံမပါပါဘူး။ လကျထပျတယျဆိုတာ သူမလကျထပျလိုကျတဲ့ ယောကျြားအတှကျ သခြုင်္ိငျးပါပဲ။ ကအြောငျခွှတေယျ၊ လကျထပျယူတယျ၊ ပွီးရငျ သတျပဈတယျ။ သူမရဲ့ ရညျရှယျခကျြကဘာလဲ? သတျဖို့အရေး လကျပဲထပျနရေဦးမလား? ဘာကွောငျ့ ကိုယျယူပွီးတဲ့ ယောကျြားတှကေိုပဲ သတျရတာလဲ? သူမက ရူးနတောလား? ကဲ အဖွကေို အကျဒျမငျနဲ့ အတူတူ ရှာကွညျ့ကွရအောငျ…
သူမနာမညျကိုတော့ Belle Gunness (ဘဲလျဂနျးနကျဈ) လို့ချေါပွီး ၁၈၅၉ခု နိုဝငျဘာ ၁၁ ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ အရပျကတော့ ၆ပလေောကျရှညျပွီး ကိုယျအလေးခြိနျ ပေါငျ ၂၀၀ လောကျ ရှိနိုငျပါတယျ။ ဘဲလျဟာ နျောဝကေနပွေီး အမရေိကနျကို စီးပှားရှာဖို့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီမှာပဲ ဘဲလျ အိမျထောငျကခြဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ ပထမဆုံးအမြိုးသားကတော့ Mads Albert Sorenson ဖွဈပွီး ၁၈၈၄ ခုနှဈမှာ လကျထပျဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။ သူမတို့မှာ ကလေး ၄ယောကျရှိပါတယျ။ နှဈယောကျကတော့ ငယျငယျလေးနဲ့ သဆေုံးခဲ့ကွတာပါ။ မကွာမတငျမှာပဲ ဘာကွောငျ့ရယျမသိ သူမတို့ အိမျကွီး မီးလောငျပါလရေော.. ဒီအတှကျ သူမတို့ အာမခံကွေးတှေ မနညျးမနောရလိုကျပါတယျ။ သိပျမကွာခငျမှာတော့ Sorenson ဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ အသကျအာမခံကွေးတှကေတော့ ဘယျရောကျသှားမှနျး မသိလိုကျရပါဘူး။ ဒီဖွဈရပျနှဈခုလုံးဖွဈသှားခဲ့တာဟာ သံသယဝငျစရာအခကျြတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။
ဒီအဖွဈတှအေပွီးမှာ သူမဟာ ခပျမွနျမွနျပဲ နောကျတဈယောကျနဲ့ လကျထပျလိုကျပါတယျ။ ၈လပဲကွာပါသေးတယျ၊ သူမရဲ့ အမြိုးသားက ထပျသဆေုံးပွနျပါရော.. နောကျထပျ အိမျထောငျပွုဖို့အတှကျ ဘဲလျဟာ သတငျးစာထဲ ကွျောငွာထညျ့ပါတော့တယျ။ ပွီးတော့ ငှကွေေးခမျြးသာတဲ့ သူဌေးတှဆေီကို စတငျခဉျြးကပျပါတော့တယျ။ John Moo, Henry Gurholdt, Olaf Svenherud, Ole B. Budsburg, Olaf Lindbloom, Andrew Hegelein စတဲ့လူတှအေပွငျ အခွား အမညျမသိသူတှလေညျး အမြားကွီး ရှိပါသေးတယျ။ ဘဲလျရဲ့ တောငျးဆိုခကျြကတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ။ သူမနဲ့ သူတို့ သငျ့လြျောမယျလို့ ထငျတဲ့အခါ သူမရဲ့ လယျတောအိမျလေးကို လာလညျပါတဲ့.. ဟုတျကဲ့.. သှားလညျပါတယျ။ ပွနျမလာတော့ပါဘူး။
ဘာမှနျးမသိတဲ့ ပြောကျဆုံးမှုတှထေဲမှာ အမြိုးသားတှအေပွငျ သားသမီးတှပေါ အစအနရှာမရတော့တာလညျး ရှိပါတယျ။ဥပမာဆို သူမရဲ့ ခငျပှနျးဖွဈတဲ့ ပီတာဂနျးနကျဈသဆေုံးတာအပွငျ သူ့ရဲ့ မှေးကငျးစ သမီးလေးပါ သဆေုံးခဲ့ရပါတယျ။ မှေးစားထားတဲ့ သမီးလေး ဂငျြးနီကိုလညျး ဘဲလျရဲ့ အိမျမှာပဲ သဆေုံးလကျြသား တှရှေိ့ခဲ့ရပါတယျ။ အခွားအခွားသော ကလေးတှလေညျး ထိုနညျးတူစှာပါပဲ။
ကံကွမ်မာကတော့ အမွဲတမျး ဘဲလျအပျေါပဲ ကှကျပွီးကောငျးမနခေဲ့ပါဘူး။ အပျေါမှာဆိုခဲ့တဲ့ Andrew Hegelein ရဲ့ညီ Asle Hegelein ဟာ အဈကိုပြောကျဆုံးမှုကွောငျ့ ဘဲလျဆီကို စာရေးစုံစမျးခဲ့ပါတယျ။ ဘဲလျကတော့ လှယျလှယျကူကူပါပဲ အနျဒရူးဟာ သူမနဲ့အတူ ရှိမနပေါဘူးတဲ့။ အမြိုးတှဆေီကို အလညျသှားတာ ဖွဈနိုငျပါသတဲ့.. ဒါပမေဲ့ Asle က မယုံကွညျခဲ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဘဲလျက မယုံကွညျရငျလညျး သူမဆီမှာ ကိုယျတိုငျလာကွညျ့နိုငျကွောငျး၊ ရှာမယျဆိုရငျလညျး သူမပါ ကူညီပေးမယျ့အကွောငျး၊ဒါပမေဲ့ ရှာဖှဖေို့ စရိတျစကတှကေ ဈေးကွီးတာကွောငျ့ Asle က အကုနျအကခြံရမှာဖွဈကွောငျး၊ သူမအတှကျလညျး ကူညီခ ထိုကျသငျ့သလောကျ ပေးရမှာဖွဈကွောငျး အကွောငျးပွနျလိုကျပါတယျ ။ ဒါဟာ သူမရဲ့ ကံဆိုးမှုအစပွုခွငျးအကွောငျးရငျးပါပဲ။
ဒီထဲမှာ ထူးခွားတဲ့ အခဈြဇာတျလမျးတဈပုဒျက ရှိနပေါသေးတယျ။ ဘာလဲဆိုတော့ ဘဲလျက သူမရဲ့ အငျဒီယားနားလယျကှငျးကို ထိနျးသိမျးဖို့ Ray Lamphere ကို ငှားရမျးခဲ့ပါတယျ။ Ray က ဘဲလျအပျေါမှာ ခံစားခကျြတှရှေိနပွေီး တဖွညျးဖွညျး ခဈြမွတျနိုးလာပါတယျ။ ဘယျလိုပဲ မထိုကျတနျဘူးဆိုဆို Ray က ဘဲလျဆီလာနတေဲ့ ယောကျြားတှကေို ကွညျ့လို့မရခဲ့ပါဘူး။ မနာလိုစိတျနဲ့ သဝနျတိုစိတျအရငျးခံလို့ ရနျပွုလာတဲ့အခါမှာတော့ ဘဲလျက သူ့ကို အလုပျထုတျခဲ့ပါတယျ။ အခွားလူတှကေိုတော့ သတျဖွတျပဈလို့ ပိုကျဆံတှယေူထားပွီး ဒီလူကိုတော့ အလုပျပဲ ထုတျခဲ့တာက သူမရဲ့ အခဈြတှကေို မသိမသာမြား ဖျောပွခဲ့လသေလား!!! နောကျမှ ကွညျ့စီစဉျမယျလို့မြားတှေးခဲ့လသေလား?
Asle Hegeleinရောကျလာတဲ့အခါမှာ ဘဲလျက ရှနေ့တှေနေဲ့ သှားတှပွေီ့း Ray ဟာ သူမရဲ့ အသကျအန်တရာယျကို ခွိမျးခွောကျနတေဲ့အပွငျ အိမျကိုလညျး မီးလောငျတိုကျသှငျးမယျလို့ ကွိမျးဝါးနတေဲ့အကွောငျး သှားတိုငျခဲ့ပါတယျ။ ရှနေ့ကေလညျး ရဲတှနေဲ့ အမှုဖှငျ့ဖို့ တိုကျတှနျးခဲ့ပမေဲ့ ဘဲလျကတော့ ရဲတှဆေီ မသှားခဲ့ဘဲ သူမပိုငျဆိုငျသမြှ ငှကွေေးဥစ်စာတှကေို ဘဏျကနေ ထုတျယူခဲ့ပါတယျ။သူတကယျလညျး ခမျြးသာပါတယျ။ ပိုငျဆိုငျမှုက ၂၀၁၂ ငှနေဲ့တှကျမယျဆို အမရေိကနျဒျေါလာ ၆.၃သနျးရှိပါတယျတဲ့… တကယျတော့ Ray က ခွိမျးခွောကျတာမဟုတျခဲ့ဘဲ သူမလှတျမွောကျနိုငျဖို့ အစီအစဉျကို သူမကိုယျတိုငျ ခမြှတျခဲ့တာ အမြားကွီးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဥပဒကေို လကျတဈလုံးခွား လုပျခဲ့တာမြိုးပေါ့။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူမ တိုငျကွားခဲ့တဲ့အတိုငျး သူမရဲ့ လယျတောအိမျ မီးလောငျခဲ့ပါတယျ။ မီးလောငျပွငျထဲမှာတော့ အရိုးစု ၄ခု တှရှေိ့ရပါတယျ။ ၃ခုကတော့ သူမရဲ့ သမီးတှဖွေဈတယျလို့ အတညျပွုနိုငျပွီး ၄ခုမွောကျ အရိုးစုကိုတော့ ဂနျးနကျဈလို့ ခနျ့မှနျးကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ထူးခွားတာက ဒီအရိုးစုမှာ ခေါငျးရှိမနပေါဘူး။ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ ခေါငျးကို ရှာရငျး ရှာရငျးကနေ သူမခေါငျးကိုတော့မတှရေ့ဘဲ သူမရဲ့ သားကောငျတှဖွေဈခဲ့တဲ့ လူတှရေဲ့အလောငျးတှဟော သူမလယျကှငျးရဲ့ မွကွေီးတှထေဲကနေ ပျေါထှကျလာခဲ့ပါတော့တယျ။ ပြောကျဆုံးခဲ့တဲ့ သတို့သားလောငျးတှအေပွငျ ကလေးတှပေါ ပါဝငျနပေါတယျ။
သူမတိုငျကွားခကျြ ရှိထားတာကွောငျ့ ဒီအမှုဖွဈဖွဈခငျြး Ray ကို လိုကျလံဖမျးဆီးကွပါတယျ။ Ray ကတော့ သတငျးကွားတာနဲ့ မေးရှာပါတယျ “အဲဒီမုဆိုးမနဲ့ ကလေးတှေ လှတျသှားကွရဲ့လားဗြာ.. သုံးယောကျလုံး လှတျတယျမဟုတျလား? ” ဘယျလောကျတောငျ ရငျနာစရာမွငျကှငျးလဲ စဉျးစားကွညျ့ပါယောငျးတို့… ကိုယျခဈြတဲ့သူ သတေဲ့သတငျးကိုလညျး ကွားရရှာတယျ။ သူမီးရှို့ပါတယျဆိုပွီးလညျး သူ့ကိုလာဖမျးတယျ၊ သူသိပျခဈြတဲ့ အမြိုးသမီး အလောငျးမှာတော့ ခေါငျးတောငျမကနျြခဲ့ဘူးတဲ့.. ရငျနာစရာအဖွဈကွီးပါ။ Ray ကတော့ သူ မလုပျဘူးလို့ ငွငျးဆနျနဆေဲပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ လကျတှဘေ့ဝက ဒရာမာကားတှလေို မလှပခဲ့ဘူး ယောငျးတို့ရေ.. သကျသအေဆငျ့ဆငျ့နဲ့ စဈဆေးပွီး Ray ကို အိမျမီးရှို့မှုနဲ့ ထောငျခပြဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လူသတျမှုကနတေော့ သူလှတျကငျးခဲ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သဆေုံးသူက ဘဲလျမဟုတျလို့ပါ။ အဆုံးသတျကတော့ Ray ဟာ ၁၉၀၈ ခုနှဈ နိုဝငျဘာ ၂၆မှာ ထောငျအနှဈ နှဈဆယျ ကခြဲ့ရပွီး ၁၉၀၉ ဒီဇငျဘာ ၃၀ မှာ ထောငျတှငျးမှာပဲ သဆေုံးသှားခဲ့ရပါတယျ။ ဘယျလောကျတောငျ စိတျထောငျးကိုယျကွဖွေဈခဲ့သလဲဆိုတာ :'(
မသဆေုံးခငျမှာ Ray ဝနျခံသှားတာတဈခုရှိပါတယျ။ သူဘယျသူ့ကိုမှမသတျခဲ့ပမေယျ့ ဘဲလျသတျခဲ့တဲ့သူတှကေိုတော့ ကူညီမွှုပျနှံပေးခဲ့ပါတယျတဲ့။ တဈခါတလမှောလညျး အခြိနျကုနျ သကျသာအောငျလို့ ဧညျ့သညျတှသေောကျမယျ့ ကျောဖီခှကျထဲ အဆိပျခတျ သတျပဈပါတယျတဲ့။ ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ ဧညျ့သညျရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာ ဘဲလျက ဧညျ့ဝတျကကြေပြွေုစုပွီး အစာထဲမှာ ဆေးခတျထားပါတယျ။ ဧညျ့သညျတှေ မူးဝဝေဖွေဈနတေဲ့အခြိနျမှာ သားခုတျဓားနဲ့ တဈခါတညျး ခေါငျးကိုဖွတျလိုကျတာပါတဲ့။ အလောငျးကိုတော့ မွအေောကျခနျးကို သယျသှားပွီး သူ့ရဲ့ ဒုတိယယောကျြား အသားခုတျသမား ပီတာဆီက သူမရလိုကျတဲ့ ပညာနဲ့ ဖကျြလို့ ခှေးတှကေို ကြှေးပဈတာမြိုးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ကနျြတဲ့ အကွှငျးအကနျြတှကေိုတော့ ခွံထဲမှာ မွှုပျမွှုပျထားပါတယျတဲ့။ တဈခါတလမှောတော့ နံရံထဲ အလောငျးတှထေညျ့ပွီး အင်ျဂတနေဲ့ ဖုံးလိုကျတာမြိုးတှလေညျး ရှိပါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ တဈဦးတညျးသော သကျသေ Ray ကလညျး သဆေုံးသှားခဲ့ပါပွီ။ ဘယျလိုမြားဆကျပွီး အမှုလိုကျကွမလဲ.. ဘဲလျက ဘယျမြားရောကျသှားတာလဲ? ခေါငျးပြောကျဆုံးနတေဲ့ အလောငျးကရော ဘယျက အမြိုးသမီးလဲ?… ဒီအမြိုးသမီးကို Ray ကလညျး သတျထားတာမဟုတျတော့ ခေါငျးက ဘယျလိုပွတျပွီး ဘယျကိုမြားရောကျသှားရတာလဲ?
ခကျခကျခဲခဲ လိုကျလံစဈဆေးတဲ့ အမှနျတရားဘကျတျောသားတှရေဲ့ လကျထဲမှာ အမှုက ရုပျလုံးပျေါခဲ့ပါပွီ။ အဲဒီသဆေုံးတဲ့အမြိုးသမီးကို ဘဲလျက သူမထှကျမပွေးခငျ တဈရကျအလိုမှာ ရှီကာဂိုကနေ အိမျအကူအဖွဈ ငှားရမျးခဲ့ပွီး အဲဒီနရောကနေ သူမ ထာဝရလှတျမွောကျဖို့ အသုံးခခြဲ့တာပါ။ သူမကို ဆေးခတျ၊ မသမေခငျြးရိုကျသတျပွီး ခေါငျးကိုဖွတျလို့ ရထေဲအလေးဆှဲပဈခထြားခဲ့တာပါ။ ဒါမှ ရဲတှကေ ခေါငျးကိုရှာမတှနေို့ငျဘဲ သူမလို့ ထငျကွမှာမဟုတျပါလား။
ကလေးတှကေိုတော့ ကလိုရိုဖောငျးနဲ့ မဆေ့ေးပေးသတျပွီး အလောငျးတှကေို ခေါငျးပွတျအမြိုးသမီးအလောငျးနဲ့ မွအေောကျခနျးမှာထညျ့ခဲ့ပါတယျ။ သူမကိုယျတိုငျတော့ သဆေုံးတဲ့အမြိုးသမီးရဲ့ အဝတျအစားတှဝေတျ၊ သူမရဲ့သှားတုကိုခြှတျလို့ အလောငျးဘေးမှာထားပွီး သူမကိုယျတိုငျ အိမျကို မီးရှို့ခဲ့တာပါ။ Ray နဲ့ အတူတူထှကျပွေးကွမယျလို့ ကတိထားခဲ့ပမေယျ့ နောကျဆုံးမှာတော့ သူမ ကတိဖကျြခဲ့ပါတယျ။ သူစောငျ့နတေဲ့လမျးကို ထှကျမလာဘဲ မီးလောငျနတေဲ့ကှငျးပွငျတဈဘကျက သဈတောထဲ ဝငျရောကျထှကျပွေးခဲ့ပါတယျတဲ့။ ရဲတှလေိုကျရှာလို့ တှနေို့ငျမယျ့ သကျသတှေကေိုတော့ Ray လုပျတယျထငျအောငျ ဖနျတီးထားခဲ့ပါတယျ။ ခဈြသူရဲ့ သစ်စာဖောကျမှုကို အကွိမျကွိမျခံခဲ့ရတဲ့ Ray ရဲ့ အဖွဈကတော့ ရငျနငျ့စရာပါ။
ဒီအဖွဈအပကျြတှနေောကျပိုငျးမှာလညျး မေးခှနျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ ဘဲလျဟာ ပဟဠေိဆနျစှာ ပြောကျဆုံးနဆေဲပါ။ သူဘယျရောကျသှားတယျဆိုတာ ဘယျသူမှမသိသလို သဆေုံးပွီးခဲ့ပွီလို့ သတျမှတျပွီးနောကျပိုငျးမှာလညျး အလားတူ ပြောကျဆုံးမှုတှေ ထပျဖွဈနဆေဲပါပဲ။ ဒီအလုပျတှကေရော ဘဲလျတဈယောကျတညျး လုပျခဲ့တာလား၊ ဒါမှမဟုတျ သူမကို နညျးယူပွီး တဈယောကျယောကျကမြား လုပျနတောလားဆိုတာကတော့ ဘယျသူမှ မသိနိုငျပါဘူး။
ယောငျးတို့ရော.. ဘယျလိုထငျကွလဲ? တကယျ့အဖွဈအပကျြတှကေ စိတျကူးယဉျဇာတျလမျးတှထေကျ ဆနျးကွယျတယျ ဟုတျ?
Tags: Biography, Bride, Female, Grooms, Serial Killer
ကွန်ဖူးမင်းသားဂျက်ကီချမ်းရဲ့ မေတ္တာနှောင်ဖွဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား (၂) ကား
Wathun April 5, 2018